सरकारमा नगई काग्रेसलाई समर्थन गछौ
Sunday, 29 December 2013 11:11	Rate this item
एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रभावशाली यूवा नेता वर्षामान पुन अनन्तले पार्टी सरकारमा भन्दा पनि संविधान निर्माणमा केन्द्रीत हुने भएकोले काग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँसँग गरेको कुराकानी
४ बुँदे सहमतिमा त एमाओवादी हार्यो नि ?
यो कसैको हार र जितको कुरा होईन । जसरी एमाओवादीको हारको रुपमा ब्याख्या गरिँदैछ । त्यसले सहमतिको राजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । ४ बुँदे सहमतिले दलहरुवीच संविधानसभाको निर्वाचन पछि उत्पन्न असमझदारीलाई न्यारोडाउन गरेको छ । यो कसैको जित या हार भन्दा पनि यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतन्त्र प्रति विश्वास बढाउने काम गरेकोले यसमा सबैको जित भएको छ ।
त्यसो भए सहमतिबाट एमाओवादीले के पायो त ?
एमाओवादीले के पायो भन्ने कुरा होईन । संविधानसभा नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन र द्धन्दको ब्यवस्थापनको माध्यम हो । त्यसले यसमा विश्वास बढाउनु आवश्यक थियो ।४ बुँदे सहमतिले दलहरुवीचको आशंका हटाएर विश्वासका साथ अघि बढ्ने बातावरण बनाएको छ । जहाँसम्म उपलब्धिको कुरा छ १ वर्ष भित्र संविधान बनाउने पुन प्रतिबद्धता आएको छ, मुलुक अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिबाट पुरानो अवस्थामा फर्किदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएको छ । कसैलाई दण्डित गर्ने भन्दा पनि मुलुकमा द्धन्दपछि मेलमिलाप हुने गरी मेलमिलाप आयोग गठनको प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।
अब तपाईहरु सभासद छानेर संविधानसभामा जानु हुन्छ ?
हो, यो सहमतिले संविधानसभामा हाम्रो प्रवेशको बाटो खोलेको छ । अब हामि सभासदको नाम छान्नमा लाग्छौ । निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा भन्दा पहिला नै नामावली बुझाउँछौ ।
सभासद चयनमा पार्टीभित्र चर्को विवाद छरे नि ?
यो बाहिर हल्ला गरिएको कुरा हो । यसको कुनै तथ्यगत आधार छैन । बाहिर त प्रचण्डको खल्तिबाट नाम आउँदैछ अरे भन्ने पनि हल्ला छ । तर त्यस्तो हुँदैन । बुधवारबाट नै हामि सभासद चयन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौ । पहिला हामि चयनको मापदण्ड बनाउँछौ र त्यसलाई भेट्टाउनेको नाम सिफारिस हुन्छ । पार्टी भित्र कुनै विवाद छैन ।
सरकारमा त जानु हुन्छ होला नि ?
हामिले सरकारमा जाने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनौ । यस विषयमा हामिले छलफल समेत गरेका छैनौ । त्यसैले अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको सरकार निर्माण भन्दा पनि संविधान निर्माण हो । हामि त्यसमै केन्द्रीत हुन्छौ । अहिले हामि सरकार बनाउने ढाल्ने फोहरी खेलमा लाग्दैनौ र सरकारमा जान पनि जाँदैनौ ।
त्यसो भए कुनै पनि दललाई सरकार निर्माणमा समर्थन गर्नु हुन्न ?
त्यसो होईन, हामि सरकारमा जाँदैनौ मात्रै भनेको हो । सरकारमा नगए पनि सबै भन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने हामि उसलाई बाहिरै रहेर पनि निसर्त सर्मथन गरि दिन्छौ ।
नयाँ जनादेश आए पछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ ?
हो, नयाँ जनादेश आए पछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । नैतिक रुपमा पनि यो प्रश्न उठछ यसलाई सकेसम्म राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङग्याउनु पर्छ तर दलहरुले १ वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकोले संविधान बनाउन छाडेर राष्ट्रपति परिवर्तनको विवादमा अल्झिनु ठिक हुँदैन ।
अबको संविधानसभामा एमाओवादीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
हामि संविधान निर्माणमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेर सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रयासमा लाग्छौ भने संसदमा सरकारको काम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने नीति सहित अघि बढ्छौ ।	Read 368 times	Tweet
« जब पैसाले विचार र सिद्धान्त किनिन थाल्छ.......	जनताले मलाई मेयरमा उठाउनु पर्छ भन्छन - रामरुप कुर्मी »